Apokalipsan'i Esdrasa - Wikipedia
Ny Apokalipsan'i Esdrasa na Apokalipsa jiosin'i Esdrasa dia soratra apokrifa na pseodepigrafan'ny Baiboly. Io boky io dia mitantara indrindra ny resaka nifanaovan’i Ezra (na Esdrasa) sy ny arikanjely Oriela ao amin’ny fahitana. Tsy i Ezra (na Esdrasa) no nanoratra io boky io.
Misy fahitana fito niseho tamin'i Ezra (na Esdrasa) ny ao izay miresaka ny amin'ny fahotana sy ny famonjena ary ny andro farany.
2 Ireo fahitan'i Ezra
2.1 Ny fahitana voalohany
2.2 Ny fahitana faharoa
2.3 Ny fahitana fahatelo
2.4 Ny fahitana fahefatra
2.5 Ny fahitana fahadimy
2.6 Ny fahitana fahenina
2.7 Ny fahitana fahafito
Ny anaran'ny bokyHanova
Ampahany be ao amin'ilay atao hoe Boky fahefatr'i Esdrasa io soratra io ka mety hantsoina hoe Boky fahefatr'i Esdrasa ihany koa. Ny ortodoksa slavonika dia manao azy hoe 3Ezdra fa ao amin'ny Baiboly ortodoksa etiopiana izay manao azy ho deoterokanonika dia tao hoe ዕዝራ ሱቱኤል / Izra Sutuel.
Ny iantsoana azy ato amin’ny Wikipedia malagasy Anarana omen’ny mpikaroka Volgata Slavonika Etiopiana Anglisy
Ireo fahitan'i EzraHanova
Ny fahitana voalohanyHanova
Ny fahitana voalohany dia mahakasika ny amin’ny fahotana sy ny famonjena, ary tsapa ny fanakaikezany ireo epistilin’i Paoly. Mandalo ny zava-tsarotra atrehina amin’izao fotoana izao fa ho tonga ihany ny valisoan’ny marina rehefa tratra ny isa izay tokony ho fenoina.
Ny fahitana faharoaHanova
Ny fahafaham-baraka mihatra amin’ny vahoaka jiosy dia nohazavain’ny anjely Oriela fa ho tsaraina ny olon-drehetra amin’ny Andron’ny fitsarana : ny Zanak’olona aloha no hitsara avy eo Andriamanitra amin’izay ka izany no Andro farany.
Ny fahitana fahateloHanova
Ny fahitana fahatelo dia manohy ny resaka fahotana sy famonjena. Tsy ho azo Ny fahasambarana raha tsy amin’ny fahavitan’ny asa sy fahoriana maro. Ireo ho voavonjy dia vitsy tahaka ny volamena sy ny vatosoasarobidy. Raha tsy hamaivanin’Andriamanitra ny enta-mavesatsika dia tsy hisy olona afaka hiaina. Ny fanahin’ny olo-marina dia ho any amin’Andriamanitra mandrakizay fa ny an’ny mpanota kosa dia hirenireny sy hijaly. Tsy misy ny fanelanelanana azo atao amin’ny olona efa maty fa samy hijinja ny fahamarinana na ny tsy fahamarinana nataony ny tsirairay.
Ny fahitana fahefatraHanova
I Ezra dia nahita vehivavy momba izay misaona fa maty anaka tamin’ny andro nahaterahany azy izay tsy hita fa nosoloan’ny vaviantitra iray. Io vehivavy io, hoy i Oriela, dia i Ziona ary ny zanany dia ny fandravana an’i Jerosalema nefa hiseho ihany ny voninahitr’ilay tanana masina vaovao.
Ny fahitana fahadimyHanova
Ny fahitana fahadimy dia mitovy amin’ny ao amin’ny toko faha-7n’ny Bokin’i Daniela, dia ilay voromahery telo loha izay tsy iza fa ny fahefan’i Roma (angamba i Vespasiana sy i Titosy ary i Domitiana), na ny firenena rehetra mampahory ny tany sy ny olo-marina, mivoaka avy ao an-dranomasina. Ho levona izy fa ny tany kosa hafahana amin’ny fahoriany (ampitahao: bibidia fahefatra ao amin’ny Daniela 12.11).
Ny fahitana faheninaHanova
Ny Mesia miseho amin’ny endrik’olona (ampitahao: "zanak’olona" ao amin’ny Daniela 7.13), izay miakatra avy any an-dranomasina sy mitaingin-drahona, sady mandevona ireo fahavalony amin’ny alalan’ny lalafo sy vainafo mitambolimbolina mivoaka avy ao am-bavany, na eto an-tany na amin’izao rehetra izao, sady manafaka ireo voafidiny (ampitahao amin’ny Apok. 19.11-12).
Ny fahitana fahafitoHanova
I Ezra dia nangataka ny Fanahy Masina tamin’Andriamanitra mba ho tonga aminy hahafahany manoratra izay miseho eto amin’izao tontolo izao sy izay voasoratra ao amin’ny Lalàna. Ny ampahany iray tamin’izany fahitana izany ihany no voahazava tamin’i Ezra fa ny ampahany sisa kosa dia takona, ka olona vitsivitsy ihany no hahalala ny heviny (4Esdr. 14.26).
Boky fahefatr'i Esdrasa
Boky fahadimin'i Esdrasa
Boky fahenin'i Esdrasa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokalipsan%27i_Esdrasa&oldid=1011444"
Dernière modification le 15 Mey 2021, à 14:55
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 14:55 ity pejy ity.